May 2021 - Iphepha 2 of 24 - Funda ukurhweba
Inyanga: Ngamana 2021
Ixabiso leMeroero (XMR) liHla ngokuphakathi kwe- $ 281 kunye ne- $ 217 yamaXabiso amaxabiso
Ukuhlaziywa: 31 May 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Monero (XMR) ngoMeyi 30
Kwimeko apho kukho ukwahlukana kwenqanaba lokumelana ne- $ 281, iidola ezingama-322 kunye needola ezingama-361 zokuchasa zinokuvavanywa. Ukwahlulwa kwenqanaba lenkxaso eyi- $ 217 kuya kunciphisa ixabiso leMonero ukuya kuthi ga kwi-184 kunye ne-161 yamanqanaba eedola.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 281, $ 322, $ 361
Amanqanaba enkxaso: $ 217, $ 184, $ 161
IXMRUSD yexesha elide iTrend: Ukuthwala
UMonero ngu-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. I-XMR ekugqibeleni ifumene inkxaso kwinqanaba le-184 leedola emva kokuwa okukhulu ukusuka kwinqanaba lama- $ 511 lokumelana. Kwakukho ukubuyela umva kwinqanaba lokumelana ne- $ 281. Amandla okonyuka asilele kwaye ixabiso alinakonyuka ngaphezulu kwenqanaba le- $ 281. Isantya se-bearish ngokulinganayo siba buthathaka kwaye ixabiso belihleli ngaphakathi kwe- $ 281 kunye ne- $ 217 yenqanaba lexabiso.
Itshathi yemihla ngemihla yeXMRUSD, ngoMeyi 30
Ixabiso leMonero lithengisa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kunxibelelwano olusondeleyo njengophawu lwe-low bearish kunye ne-bullish. Kwimeko apho kukho ukwahlukana kwenqanaba lokumelana ne-281 yeedola, i-322 yeedola kunye ne-361 yamanqanaba oxhathiso anokuvavanywa. Ukwahlulwa kwenqanaba lenkxaso eyi- $ 217 kuya kunciphisa ixabiso leMonero ukuya kuthi ga kwi-184 kunye ne-161 yamanqanaba eedola. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-40 kunye nomgca wesiginali olatha phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
Ixabiso leXMRUSD kwiXesha eliPhakathi leTrend: Ukutshintsha
I-Monero kukuhamba okujikelezayo kwitshathi yeeyure ezi-4. Uxinzelelo lwabathengisi alunakwaphula inqanaba lenkxaso le- $ 217. Kwangokunjalo, uxinzelelo lweenkunzi zeenkomo alunakulichitha i-281 yenqanaba lokumelana. Yiyo le ekhokelela ekuhambeni okungafaniyo kwinqanaba elikhankanyiweyo ngasentla.
Itshathi yeXMRUSD 4hour, ngoMeyi 30
Ixabiso lijikeleza ngaphezulu kwaye lijikeleze ii-EMA ezimbini nge-EMA yeentsuku ezili-9 edibene ne-EMA yeentsuku ezingama-21 ezibonisa ukuba ukudityaniswa kuyaqhubeka. Isalathiso samandla esimalunga namanqanaba angama-50 akhomba ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
tags Marketing, Uhlalutyo Technical, XMRUSD
NjengoYen, iiMali ezifanayo aziGxilwe kwiNdlela
Ukuhlaziywa: 30 May 2021
Ngaphandle kweYen, ekuvuleni ithemba kwakhona, i-sterling yayiyeyona ithembekileyo, njengeyona mali yesibini inamandla. Kwelinye icala, i-Yoff's selloff yayibonakala kakhulu, ngelixa idola lase-Australia latshitshiswa ngokuthengisa ngokuchasene neYen. Owona mdlali wesithathu wenza eyona nto wayeyi-Franc yaseSwitzerland.
Ngokubanzi, iimarike zezemali zaxutywa kwiveki ephelileyo yorhwebo kaMeyi. Idola yaseNew Zealand ekuqaleni yenyuka emva kwezimvo ze-RBNZ ze-hawkish. Nangona kunjalo, ngaphandle kokugqiba njengeyona inamandla, khange ikwazi ukufumana umhlaba omninzi ukusuka apho. Emva kwedatha yokunyuka kwamaxabiso eyomeleleyo, kwabonakala ngathi idola yayiza kujika, kodwa ikwalwile nokuvala inkampani.
Kuzo zonke ezinye iimarike, amasheya aseMelika kunye namaxabiso ahlala ngaphakathi kwinqanaba elimiselweyo. I-DAX izamile ukuqhubeka nokuqhuba irekhodi kodwa ayabinakho ukwenza oko ngenxa yokunqongophala kwenkuthazo. I-Nikkei inyuse ukubuya okuqinileyo, kodwa ayikwazanga ukubuyisa isibambo se-30k. Ngaphandle kokuqhubeka kwayo kwangoku, igolide kusafuneka iphule ngokuqinileyo isibambo se-1900. I-oyile ekrwada ye-WTI khange ikwazi ukwaphula ngokukhuselekileyo inqanaba lokumelana ne-67.83.
Ukwehla kweYen kulindeleke ukuba kuqhubeke
Kule veki, i-Yen yeyona mali iqhuba kakubi kwiqela le-G10. Ngelixa iindaba ezimbi eJapan, ezithoba ulindelo lwamaxabiso emali, zinokuxhasa i-yen, umgaqo-nkqubo wezezimali weBhanki waseJapan ixesha elide, kudityaniswa nolindelo lwenkxaso eyandisiweyo yezemali kunye nomdla wokutya onobungozi kakhulu, xa zizonke zigcina i-yen ibuthathaka.
IJapan inokuba ikhokelele kwenye imeko yokudodobala kwezobuchwephesha njengoko urhulumente enomdla wokubhengeza ukongezwa kwale meko yangoku kude kube nguJuni 20- kwiiveki nje ezi-5 phambi kokuqala kweMidlalo yeOlimpiki.
Ngokwiphephandaba laseNikkei, oku kunokwenzeka ukuba kuthetha ukuba i-BOJ izakuphendula kulwandiso lwenkqubo yokunceda ubhubhane ngaphaya komhla obekiweyo ngo-Septemba. Ke, umxholo wehlabathi wokuhlaziya okwenzeka e-US, eYurophu nase-UK kungenzeka ukuba uyikhuphele ngaphandle iJapan, enokuthi ishiyeke njengoko kulumkile ukuqinisekisa ukuqhubeka kwe-Olimpiki.
Ngokunikwa umbono wethu wobuthakathaka obanzi beedola zaseMelika, kukho indawo ethe kratya yokuba i-yen yehle ixabiso xa kuthelekiswa nemali engezizo eyedola. Nangona ukuhamba kwepotifoliyo enqamlezayo kungakhange kubonise ukuphuma okucacileyo ukusukela ekuqaleni konyaka-mali, intengiso eqikelelweyo ikulungiselele ngokukhawuleza ukuba i-yen yenze buthathaka ukuphela.
Ixabiso leXAGUSD lisetelwe ukunyuka phezulu ukuya kwinqanaba le- $ 28.00
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-ngoMeyi 30
Isilivere (XAGUSD) ikwi-uptrend, kunye nabathengi abalawula nayiphi na idiphu kunye nokuseta i yiya phezulu ukuya kwingingqi ye- $ 28.00. Ixabiso lesilivere okwangoku yi- $ 27.93 ngeoyunce nganye, inyuke ngepesenti eyi-0.32. Ixabiso lesilivere liyatsalwa lisiwe ezantsi njengoko idola yaseMelika kunye nezemali zikomeleza.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 29.50, $ 28.90, $ 28.32
Amanqanaba enkxaso: $ 27.50, $ 27.00, $ 26.72
I-XAGUSD yexesha elide iTrend: Ranging
Isilivere (XAGUSD) amaxabiso azinza phantsi kwe- $ 28.00 kwaye igcine i-bias ye-bullish ngokubanzi nangona inamandla e-dollar yase-US. Isibini semali yeXAGUSD sigqibe urhwebo lwangaphandle lwangoLwesihlanu lwenyuka iipesenti ezi-0.32, okuthetha inyathelo elilungileyo ukusuka kumanqanaba angaphambili.
Ukuhamba kuphela ngezantsi kwe- $ 27.50 kwaye i-MA 13 inokuguqula imeko. Ngeli xesha, ukuthenga iidiphu sesona sicwangciso silungileyo, kwaye iSilver iyanconywa ukuba inyuke. Okwangoku, ukuba inqanaba lenkxaso elichaziweyo liyabamba, iXAG inokurhweba ecaleni ngokuchasene nedola yaseMelika kwiseshoni elandelayo yokuthengisa. Nawuphi na ubuthathaka obuthe kratya, nangona kunjalo, kufuneka ugqithe i-27.40 yeedola ngeveki ukubonelela nge-XAGUSD ye-bullish engenantsingiselo.
I-XAGUSD yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Ukulinganisa
Emva kokusondela ekuchaseni kwinqanaba eliphambili le- $ 28.00, ixabiso lesilivere lenze ukubuyela umva kubuchwephesha. Kwelinye icala, iyure ye-4 MA 5 yokuwela i-MA 13 ephezulu kwinqanaba le- $ 27.70 ukuya kwinqanaba le- $ 28.00 inokuthi inyuse ixabiso leXAGUSD ngaphezulu.
Okwangoku, inqanaba linokugcina inkxaso kwinqanaba le-27.50 leedola. Ngakolunye uhlangothi, xa kwenzeka ukunyuka, isinyithi esimhlophe sinokufumana ukuxhathisa kumgca olandelayo we-28.32. Ngenxa yoko, imarike inokubanakho ukuya phezulu kwiiseshoni ezizayo.
tags Uhlalutyo Technical, XAGUSD
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): I-Ether Falls esezantsi, ubuso bokwaliwa kwi-2,450 yeedola
I-Ethereum iyawa ukuphinda utyelele isezantsi kwi-1,750 yeedola
I-crypto ijongene nokwaliwa kwi-2,450 ephezulu yeedola
Ixabiso langoku: $ 2,361.01
Intengo yeNtengiso: $ 273,579,327,968
Umthamo wokuThengisa: $ 29,964,927,971
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 2,000, $ 2,200, $ 2,400
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 1,800, $ 51,600, $ 1,400
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngoMeyi 30, 2021
Ethereum uqalile kwakhona kwi-downtrend entsha emva kokwaliwa ukusuka phezulu kwi-2,900 yeedola. Ngenxa yokwaliwa, u-Ether walala kwi $ 2,200 kwaye walungisa ngaphezulu. Ukulungiswa okuphezulu kuye kwaphazamiseka kwi-2,450 ephezulu yeedola. Eyona altcoin inkulu yenza uthotho lwezinto eziphantsi nezisezantsi. Namhlanje, intengiso iqhubekile nokuhla kwayo ngenxa yokulahlwa kwe- $ 2,450. Iibhere zinokufuna ukuphinda zibuyele ezantsi zangaphantsi nge- $ 1,750 njengoko ingqekembe yehla isuka kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili.
I-crypto ingaphantsi kweentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs ezibonisa ukuba i-Ether ikwindawo ye-bearish. Oku kubangela ukuba ingqekembe iwe ezantsi. Ingqekembe yehle kwinqanaba lama-42 leNdawo yamaQiniso aMandla aNxulumene nayo 14. Ibonisa ukuba i-altcoin ikummandla weDowntrend kwaye ungaphantsi kwe-50.
I-Ethereum inokuthi iqhubeke ukwehla kwicala elisezantsi. Kwi-downtrend yokuqala, u-Ether waziphosa kwi- $ 1,750 ephantsi. Kwidowntrend yesibini, i-crypto ifumene inkxaso ngaphezulu kwe-2,200 yeedola emva kokwaliwa kwayo kwi-2,900 ephezulu yeedola. Eyona altcoin inkulu iphinde yaqala ngokunyuka ngaphezulu kwe- $ 2,200 ekwabonisa enye ukwaliwa. Ukubuyiselwa kwakhona kwi-2,450 yeedola kuya kuqhubeka kwicala elisezantsi.
IiNgxowa-mali zeHedge eziSekwe kwi-Crypto ziphumelela kakhulu kwi-2020 ye-Cryptocurrency Bull Run
Ngokwengxelo entsha eyenziwe yi-PwC, i-cryptocurrency ejolise kwi-hedge fund inyuse utyalomali lwabo kwi-2020 ngokusondele kwi-100% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Ngokomndilili, ezi nkampani zibuyile malunga ne-120% kunyaka ophelileyo xa kuthelekiswa ne-30% kwi-2019.
Ngeli xesha, i-PwC kunye noMbutho woLawulo loTyalo-mali oluNye (AIMA) kutsha nje bakhuphe ingxelo yabo ye-Global Crypto Hedge Fund Report. Ingxelo ihlalutye ukusebenza kwemali ye-crypto hedge ejongene "nolwelo kunye noluntu."
I-duo ichonge malunga neenkampani ezingama-200, nge-81% yezi nkampani zisungula kwiminyaka emithathu edlulileyo. I-2020 ibingunyaka ophumelele ngokukodwa kwimveliso ye-crypto, ikakhulu ngenxa yokungena okuphezulu kwabatyali mali beziko kunye nokunyuka kwexabiso lentengiso.
Oko kwathethi, i-crypto-based hedge fund ikhulise isiseko sayo seasethi ukusuka kwi-2 yezigidigidi zeedola ngo-2019 ukuya kwi-3.8 yezigidigidi zeedola ngo-2020.
Ingxelo yaqaphela ukuba:
"Umndilili we-AUM kulo nyaka kuvavanyo lwemali inyuke ukusuka kwi-12.8 yezigidi ukuya kwi-42.8 yezigidi, ngelixa i-AUM ephakathi inyuke ukusuka kwi-3.8 yezigidi ukuya kwi-15 yezigidi."
Ngokuqaphelekayo, iingxelo zibonisa ukuba iimali ezithobela ubuchule bokukhetha ixesha elide kuphela zenze eyona mbuyekezo iphantse yanama-300%.
Okwangoku, iimali ezisekwe kwi-crypto zixele ukuba uninzi lwabathengi babo ngabantu abanexabiso eliphezulu, abenza i-54% yazo zonke iindawo zokulala, zilandelwa ziiofisi zosapho ezingama-30%.
IiNgxowa-mali zoHedge zeMveli ziyabandakanyeka ngokukhawuleza
I-PwC kunye ne-AIMA zikwaqhube uvavanyo kwimicimbi yemveli yehedge kwiimbono zabo kunye notyalo-mali olunokubakho kushishino lwe-cryptocurrency. Njengoko bekulindelekile, ezi nkampani zonyuse ukubonakaliswa kwazo kumzi mveliso we-crypto kwi-2020 boom.
Uphando luye lwabonisa ukuba i-21% yemali yemveli yenze utyalomali kwii-cryptocurrensets ezininzi, ngakumbi kwi-Bitcoin. Ukongeza, ngaphezulu kwe-85% yezi mali ziqinisekisile ukuba ziya kuthi zisebenzise imali eninzi kushishino ekupheleni konyaka.
Okwangoku, abo balumkileyo malunga notyalo mali kwisithuba se-crypto sikhankanye ukungaqiniseki kolawulo ukuba ibe sesona sithintelo sicinezelayo.
tags Cryptocurrency, Hedge Funds, iindaba
Uhlalutyo lweNtengiso yeBitcoin: Iibhere zigcina ukubusa
Emva kwenye iveki engazinzanga, Bitcoin (BTC) utsibe malunga ne- $ 3,000 ukusuka kwiintsuku ezisixhenxe ezisezantsi. IiAltcoins zikwathumele ukubuyela okuhle namhlanje, kulandela idiphu eyi-200 yezigidigidi ngeempelaveki. Ixabiso elipheleleyo lemarike ye-cryptocurrency iphantsi kwe- $ 1.4 trillion izolo, ukusuka kwi-1.6 yezigidi zeedola.
Imali yokuqala yedijithali ilwe ngokungaphumeleli ngamanqaku angama- $ 40k kwezi veki zimbalwa zidlulileyo. Okona kulahliweyo kutsha nje kwinqanaba leedola ezingama-40k kuthumele iBitcoin kwi - $ 5k yokwehla.
Oko kwathiwa, ukwaliwa emva kokwaliwa ukusukela oko kwehla, kunye ne-BTC ephumayo kule veki ikwi- $ 33,410. Nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo ziye zalwa izinyo kunye nesikhonkwane ukuze ziphinde zigcinwe kwaye kugcinwe uphawu lwe-cryptocurrency lusebenza kwinqanaba leedola ezingama-35k. Ngexesha lokushicilela, i-Bitcoin ithengisa nge-35,800 yeedola njengoko abarhwebi belindele ukuhamba okulandelayo kwemarike.
Ukungazinzi okuphuculweyo okubonwe kwintengiso kutshanje bekulindelwe ngandlela ithile. Iingxelo zamva nje ziveze ukuba isixa se-BTC esigcinwe kutshintshiselwano esivela kuye sibonile ukunyuka okubonakalayo emva kwexesha, ukunyuka ngoMeyi 19. Ngokwesiqhelo le metric luphawu lokutshintsha okuzayo kunye nokungazinzi.
Okwangoku, ii-altcoins zijamelene nengxaki efanayo kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo njengo-Ethereum, Binance Coin, Cardano, Dogecoin, Ripple, Polkadot, kunye no-Uniswap bonke bathumele ukubuyisa okundilisekileyo kwingozi yezolo.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukela-ngoMeyi 30
I-Bitcoin okwangoku ithengisa ngaphakathi kwejelo elihlayo, elibonisa ukwehla kwayo okungaguqukiyo kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo. Ukulandela ukubola okubukhali ukusuka esiphelweni esisezantsi, ixabiso le-BTC ngoku likwisiphelo sesitishi esikufutshane nophawu lwama- $ 36k.
Oko kwathethi, isenzo sexabiso se-BTC esikufutshane kufuneka sichaze ukuba kwenzeka ntoni emva koko. Ikhefu elingaphezulu kwamanqaku angama- $ 36k anokubeka inqanaba lama-37,500 eedola nangaphezulu ekuboneni iinkunzi ze-BTC.
Nangona kunjalo, ukusilela ukucoca eli nqanaba kunokuvula umnyango kwinqanaba le-33k yeedola kwakhona.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 36,000, i- $ 37,500, kunye ne- $ 39,500, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 35,000, $ 34,200, kunye ne- $ 33,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.57 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 678 billion
I-Bitcoin Dominance: 43.6%
tags uhlalutyo, Bitcoin, BTC, Cryptocurrency
I-USOIL (WTI) Ukuchaswa kobuso kwi $ 66 ePhakamileyo, ibuye iqale ecaleni kwendlela
Ukuhlaziywa: 29 May 2021
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 66.00, $ 70.00, $ 74.00
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 48.00, $ 44.00, iirandi ezingama-40.00
USOIL (WTI) yexesha elide iTrend: Bullish
USOIL kukwi-uptrend. Ukunyuka okwangoku kufikelele kwi-67.50 ephezulu yeedola kwaye kwaxhathiswa. Oku kube sisenzo sexabiso ukusukela nge-Matshi 8. Ngalo lonke ixesha i-USOIL ingavunyelwanga, imakethi iya kuwa kwi $ 58 okanye kwi-60 yeedola ezisezantsi. Okwangoku, i-oyile ekrwada ye-WTI iyawa emva kokufikelela kwinqanaba eliphezulu.
USOIL - Itshathi yemihla ngemihla
I-USOIL (WTI) ikwinqanaba lama-58 lamaNqanaba aMandla aNxulumene naMandla isiGaba se-14. Ibonisa ukuba i-USOIL ikwi-uptrend kwaye ingaphezulu kwe-50. Ixabiso le-WTI lingaphezulu kwee-SMAs ezibonisa ukuba intengiso iya kunyuka.
USOIL (WTI) phakathi kwexesha eliphakathi: Ukuhlengahlengiswa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso le-WTI lisemacaleni ukusukela ngoMeyi 4. Abathengi kusafuneka baphule ukunganyangeki kwi-66 yeedola, ngalo lonke ixesha ukuphinda kuphindwe kutsha nje. Kwinyanga ephelileyo, i-oyile ekrwada ye-WTI iguquka phakathi kwe- $ 62 kunye ne- $ 66. Imakethi iyehla njengoko ivavanya inqanaba lokumelana. I-USOIL iya kuhamba xa uxhathiso luphuliwe kwaye umfutho wokuqina uzinzile.
USOIL-4 Itshathi yeYure
Ixabiso le-WTI lingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ngoku ikwi-bearish umfutho. Abathengisi kunokwenzeka bavele ukutyhala amaxabiso ezantsi. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni.
Imbonakalo Jikelele yeUSOIL (WTI)
I-USOIL (i-WTI) ihamba ecaleni kwecala elingaphantsi kokumelana kwinqanaba lama-66. Namhlanje, iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukwaphula ukuxhathisa njengoko imeko esecaleni iqala kwakhona. Iimarike ziwile kodwa kuvavanya i-SMA yeentsuku ezingama-21. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka kwakhona xa amaxabiso esaphuka ngaphantsi kwee-SMAs.
Phawula: I-Learn2Trade.com ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo-mali
tags Uhlalutyo Technical, USOIL, WTI
I-GBP / JPY ihamba phambili kodwa ifikelela kuMmandla oThengisiweyo kwiNqanaba le-156.00
Inqanaba lokumelana eliphambiliImigangatho:
Amanqanaba enkxaso aphambili146.000, 144.000, 142.000
I-GBP / JPY Ixabiso leXesha elide leXesha: Bullish
IGBP / JPY Isibini sikwi-uptrend. Namhlanje, intengiso inyukele kwinqanaba le-156.00 ephezulu. Kuyatshiwo ukuba esi sibini sifikelele kwingingqi ethengwe ngaphezulu. Ngo-Epreli 6 uptrend umzimba wekhandlela ovavanyiweyo wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci 38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba iphawundi iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye phezulu kwe-161.42.
I-GBP? JPY-Itshathi yemihla ngemihla
I-GBP / JPY inyuke yaya kwinqanaba lama-73 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Oku kubonisa ukuba esi sibini sifikelele kwingingqi ethengiweyo. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
I-GBP / JPY Umndilili wexesha eliphakathi: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini esi sihambela phezulu. Iibini zibuyise ngaphezulu kwenqanaba le-154.00 ukufikelela kwinqanaba eliphezulu le-156.00. Ivavanye ephezulu ngoku kwaye iyawa. Okwangoku, i-GBPJPY ibuyela ezantsi.
I-GBP / JPY-Itshathi yeeyure ezi-4
Isibini se-GBP / JPY singaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ikwi-bearish umfutho. Iibhendi ze-stochastic zihlehla ezantsi. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihamba ngaphezulu zibonisa inkqubela phambili.
Umbono ngokubanzi we-GBP / JPY
Isibini se-GBP / JPY sikwihambo ephezulu. Okwangoku imarike ifikelele kwingingqi ethengiweyo kwaye ibuyela ezantsi. Akucaci ukuba ubungakanani be-downtrend.
tags IGBP / JPY, Uhlalutyo lwamaxabiso
Usihlalo we-SEC Ubongoza iCongress ukuba iwise umthetho kuShishino lwe-Crypto
Ukuhlaziywa: 28 May 2021
USihlalo omtsha we-US Securities and Exchange Commission (i-SEC), uGary Gensler, ubongoze iCongress ukuba ipasise umthetho we-cryptocurrency ukukhusela abatyali mali. UGensler utyhile ukuba iKhomishini isebenza neKhomishini yokuRhweba ngeRhafu yezoRhwebo (i-CFTC) kunye neSebe likaNondyebo wase-US ukujongana nokusetyenziswa ngokungekho mthethweni kwee-cryptocurrensets.
UGensler ucacisele ikomitana kwiCongress ukuba zikhona "Izikhewu" kulawulo lwemali eyi-cryptocurrency. Usihlalo uqaphele ukuba ngoku kukho amawaka ezigidi zemali ezikhoyo, kwaye uninzi lusebenza njengokhuseleko olungabhaliswanga. Uye waphawula ukuba:
"Sikwazile ukuzisa iintshukumo ezingama-75, kwaye ngoku kukho ezinye ezingathobeliyo."
Usihlalo wanyanzelisa ukuba owona mceli mngeni ubalulekileyo ojamelene nommiselo wolawulo lwemali engeyiyo imali kukungabikho kolawulo olumiselweyo lotshintshiselwano ngeemali zedijithali. UGensler wathi angathanda i-SEC neCongress "Ukuzisa ukhuseleko lwabatyali kumaqonga, apho ngamanye amaxesha izinto zorhwebo, ngamanye amaxesha ukhuseleko zithengisa eqongeni."
Icandelo le-Crypto lifuna ukuTshintshiselana ngeSitokhwe ngoKhuseleko lweBanga
Usihlalo ukhankanye imizekelo ethile "Ukubaleka ngaphambili," apho ukutshintshiselana nge-imali yedatha kungahambisa ulwazi lwe-odolo kwaye kwenza ukuba umtyali mali akwazi ukurhweba ngaphambi kwentengiselwano ye-crypto, ukwenza ukuthengwa kubize abanye abatyali mali.
UGensler wachaza ukuba:
"Ngaphandle kwepolisa ngokubetha kunye neminye imithetho yendlela, emva koko abathathi-nxaxheba bangathengisa imiyalelo yakho."
Usihlalo utyhile ukuba i-SEC isebenza ukukhusela abatyali zimali kutshintshiselwano lwemfuyo ngokwesiko ngobuqhetseba nakwindlela yokuziphatha ngobuqhophololo kodwa ayenzi okufanayo kutshintshiselwano nge-crypto. Watsho ukuba iKhomishini "Uzama ukuzisa ukhuseleko olufanayo kutshintshiselwano apho uthengisa khona iiasethi ze-crypto, njengoko unokulindela kwiNew York Stock Exchange okanye eNasdaq."
Isiteyitimenti sikasihlalo ekonyuseni ukhuseleko lwabatyali mali kwimveliso ye-crypto iyafana nengxelo eyenziwe kwinkomfa ye-Financial Industry Regulation Authority (FINRA) kwiveki ephelileyo.
tags Cryptocurrency, iindaba, IMIMISELO, sec
Emva kokuFunda okuQinisekileyo kwamaxabiso, iDola iyenyuka
Idola inyukile kwiseshoni yaseMelika yokuqala, iqiniswe ngamanani anyukayo aphezulu kunalindelweyo. Ixabiso lentengo kwi-PCE engundoqo lafikelela kwelona zinga liphezulu ukusukela ngo-1991. Ingca eluhlaza ingavala iveki ngenqaku eliphezulu, inokuthi iphele njengeyona inamandla, xa kuthengwa amandla okuthenga. Iimali zezinto zorhwebo, kubandakanya idola yaseNew Zealand, kwelinye icala, ukwehla ngokukhawuleza. I-yen, kwelinye icala, inakho ukugqiba iveki ngokusebenza kakubi.
Ngo-Epreli, umvuzo wobuqu e-United States wehla -13.1 yeepesenti kumama, okanye i-USD 3.21 trillion, ethe ngcono kune -14.0 yepesenti yomama uqikelelo. Inkcitho yobuqu inyuse iipesenti ezi-0.5 ze-mama, okanye i-USD 80.3 yezigidigidi, isilela kufutshane ne-0.6 yepesenti yomama uqikelelo.
Isalathiso sexabiso sePCE sonyuke nge-3.6 yeepesenti ngonyaka, inyuka isuka kwi-2.4 yeepesenti ngonyaka, ngaphezulu kokulindelweyo nge-2.2 yepesenti ngonyaka. Isalathiso sexabiso sePCE sonyuke saya kwiipesenti ezi-3.1 ngonyaka, inyuka isuka kwi-1.9 yeepesenti ngonyaka, ngaphezulu kokulindelweyo kwepesenti ye-3.0 ngonyaka. Ukusilela kwempahla yorhwebo kuncitshisiwe kwi-USD -85.2 yezigidigidi ngo-Epreli, xa kuthelekiswa nolindelo lwe-USD -92.0 yezigidigidi.
Ireyithi yokungaSebenzi yase-US ilindelwe ukuQhubeka nokuhla ngomgaqo wokuhla
"Iirollroll zonyuke kakhulu ngemigangatho yangaphambi kovimba," utsho omnye umhlalutyi, “Kodwa sibona umngcipheko othile wokuhlaselwa ngokubhekisele kwisivumelwano kwakhona kule nyanga,”ays enye.
“Uqikelelo lwethu lubonisa ukuncitshiswa komyinge wabantu abayi-7.7 yezigidi kumanqanaba angaphambi kwe-COVID. Emva kwesiphithiphithi esingalindelwanga ngo-Epreli, inqanaba lentswela-ngqesho kulindeleke ukuba liqhubeke kwakhona.
Emva kokuwa ngo-Epreli, zombini izikhombisi ze-ISM kulindeleke ukuba zikhuphuke ngoMeyi. Ingqikelelo yethu yesalathiso sokwenza isezantsi kuno-Matshi wama-64.7, iminyaka engama-37 ephezulu, kodwa silindele ukuba isalathiso seenkonzo siphinde sibuyele kwelona xesha liphela likaMatshi lingama-63.7. (Idatha iqala ngo-1997.) Njengoko izibonelelo zokukhuthaza imali kunye nokuvula kwakhona ziphela, silindele ukuba izalathiso zehle kwiinyanga ezizayo.
← Entsha izithuba 1 2 3 ... 24 abaDala izithuba →